ရဟန်းသံဃာတော်တွေ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြ မှုကို မကြိုက်ကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » ရဟန်းသံဃာတော်တွေ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြ မှုကို မကြိုက်ကြောင်း
ရဟန်းသံဃာတော်တွေ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြ မှုကို မကြိုက်ကြောင်း
Posted by ခင်ခ on Dec 15, 2012 in Facebook, Politics, Issues | 34 comments
သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ကိုယ်တော်တို့လမ်းပေါ်ထွက်တာတွေလျော့ကြ။ ထစ်ခနဲဆို လမ်းပေါ်ထွက်မဲ့အစား သံဃာတော် ထောင်ချီပါဝင်တဲ့ သံဃအစည်းအဝေးပွဲကြီး ဖြစ်အောင်လုပ်ကြ။ ပြီးတော့ အစည်းအဝေးပွဲဆုံးဖြတ်ချက် တွေကို သံဃာထောင်ချီ လက်မှတ်ထိုးပြီး သမ္မတဆီတင်ကြလို့ မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဦးဝီရသူ ကလည်း မိမိအနေဖြင့်လည်းလမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမှုတွေကို မကြိုက်ပါကြောင်း သီတဂူ ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဦးညာဏိဿရ ကိုပြန်လည်လျောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးမစိုးရိမ်ဆရာတော်က လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတာဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေ အနေတွေကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေပြီး ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများအထိဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးကော်မတီကို ကူညီကြပါ။ ဝန်းရံကြပါ။ ယုံကြည်ကြပါ ။ အဖြေတစ်ခုထွက်သည်အထိ သည်းခံစိတ်ရှည်စောင့်ဆိုင်းပေး ကြပါ လို့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဲ..မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ ညဏ်ပညာကြီးမားတော်မှုကြသည့် ဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်တောင် အခုလိုမိန့်လာပြီဆိုတော့…. ဆရာတော်၊သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့ သေချာစဉ်းစားတော်မှုကြပါဘုရား။ ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းပြည် အကျိုးကို တကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင် ဆရာတော်ကြီတွေရဲ့ စကားကို လိုက်နာကြပြီး လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတဲ့အလုပ်တွေကို ရပ်လိုက်ကြပါတော့ဘုရား။အထက်ပါ သီတင်းနဲ့ အမေးအဖြေတွေကို DVB သီတင်းမှာ ယနေ့ညနှင့် မနက်ဖြန်တစ်ရက်လုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း ………..။
ဖေ့ဘုတ် Mandalay Voice က ပို့လာတဲ့ သတင်းလေးပါ။ ဖြစ်သင့်တဲ့ သြ၀ါဒဆုံးမစကားရပ်ကလေးဖြစ်ပြီး တကယ်ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓအယူမှာ အဲလိုဆန္ဒပြခွင့် ရှိ မရှိ သေချာမသိပေမယ့် အထိနာမှာကတော့ အရှင်ဘုရားတို့ဘဲမို့ လိုက်နာသင့်တယ်ထင်ပြီး ဒကာ ဒကာမ တွေကလည်း မြောက်ပေးခြင်း တွန်ပို့ခြင်း မလုပ်သင့် ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ ရက်စက်ယုတ်မာတတ်သူသည် ဘယ်အ၀တ်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်ပစေ ရက်စက်တတ်ခြင်းက ပျက်ပျယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေသတည်း။
ဘုန်းဘုန်းတွေကို ခုတုံးလုပ်နေတာကို ရပ်ကြရင်ကောင်းမယ်
အန်တီက အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာ အမြဲယုံကြည်ထားတယ်။
အန်တီပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းဟာ ပညာရှိပီသပြီး ဘက်မျှတယ်..။
အမှန်ဘဲ ကိုဘဲဥရေ နိုင်ငံရေးသမား အရေခြုံတွေကလည်း မြှောက်ထိုးပင့်ကော်နဲ့ မလွယ်ဘူးဗျ။
မရွှေကြည်ရေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ လူထုခေါင်းဆောင်ပီသပါတယ်လေ။
” ရက်စက်ယုတ်မာတတ်သူသည် ဘယ်အ၀တ်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်ပစေ ရက်စက်တတ်ခြင်းက ပျက်ပျယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ”
ဦးဝီရသူ က မစိုးရိမ် ကျောင်းတိုက်မှာ လက်ရှိ သီတင်းသုံးနေပေမယ့် ၊
ဦးဝီရသူက မစိုးရိမ် ဆရာတော် တော့ မဟုတ်ဘူး ထင်မိပါတယ် ။
မစိုးရိမ် ဆရာတော် ဆိုတာက မစိုးရိမ် ကျောင်းဝင်း တစ်ခုလုံးကို
အုပ်ချုပ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးကိုမှ ခေါ်လို့ရမယ် ထင်ပါတယ် ။
သေချာ သိတဲ့သူများ ပြောပါအုန်း ။
လက်ရှိ သံဃာ့ ခေါင်းဆောင် ဆရာတော်တွေထဲမှာတော့ ၊
နောက်လိုက် သံဃာ ၊ လူ ၊ ငွေကြေး အတောင့်ဆုံးကတော့ ၊
နံပါတ် ( ၁ ) သီတဂူဆရာတော်ကြီး ပြီးရင် ၊
နံပါတ် ( ၂ ) ကတော့ ဓမ္မဒူတ ရှင်ဆေကိန္ဒ လို့ ထင်တာပဲ ။
အရှင်ဆေကိန္ဒ ရဲ့ ဓမ္မဒူတ အဖွဲ့တွေက မြို့တိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့ရတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရွှေကျင် ဂိုဏ်းလုံးကျွတ် သံဃာ့ စည်းဝေးပွဲကြီးကိုလည်း ၊
အရှင်ဆေကိန္ဒ ပဲ ဦးစီး လုပ်သွားနိုင်တာ တွေ့ရတယ် ။
ရွာသူားတို့ရဲ့ အမြင်လေးတွေကော ဘယ်လိုရှိကြလည်း ။
ဦးမာဃ သိသလောက်ကတော့ မစိုးရိမ်တိုက် ပဓာန နာယက ဆရာတော်က ဦး ရာဇဓမ္မာဘိဝံသ လို့ ထင်ပါတယ်
မစိုးရိမ် ဆရာတော် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုတော့ မသုံးသင့် ဘူးလို့ထင်တယ်
အဲဒီလို သုံးမယ့်အစား မစိုးရိမ်တိုက် ______ ကျောင်း ဆရာတော် လို့ သုံးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဦးဝီရသူ ရဲ့ ကျောင်းကို မသိလို့ မရေးနိုင်တာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါ လို့
ဦးမာဃရေ မည်သည့်မစိုးရိမ်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးသည်ဖြစ်ပစေ မစိုးရိမ် ဆရာတော်လို့ဘဲ သုံးနှုန်းလို့ရပါကြောင်း၊ အခုတင်တဲ့ပိုစ့်က ဘုန်းတော်ကြီးတွေ သတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းနဲ့ အခေါ်အဝေါ် ကို စစ်တမ်းကောက် သတင်းမဟုတ်ပါကြောင်း။ ရဟန်းဝတ်နှင့် ဆန္ဒပြခြင်းသည် မသင့်လျှော်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပိုစ့်ဖြစ်ပါကြောင်းပါ။
ဦးမာဃ ကလဲ ဦးမာဃ အမြင်ကို ပြောတာပါ
ပို့စ် နဲ့တော့ နည်းနည်း လွဲသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါနော်
မစိုးရိမ် ကျောင်းတိုက်တွေက မြို့အတော်များများမှာရှိကြပါတယ်၊ ဦးဝီရသူ မစိုးရိမ်ဆရာတော်က မန္တလေးမစိုးရိမ်တိုက်က ပါအဘဖော။ မစိုးရိမ်းကျောင်းတိုက်တွေရဲ့ နာယကဆရာတော်ကြီးကတော့ ဦးဝီရသူ မဟုတ်ပေမယ် သက်တော် ၀ါတော်ငယ်တော့ မဟုတ်ပါခင်ဗျ။
“မစိုးရိမ်တိုက်ကြီးရဲ့ အထင်ကရ ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဦးကောဝိဒါဘိဝံသက သာသနာ့အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့သာသနာမောဠိသာသနာ့ဥသျှောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ကိုနယူးယောက် မြို့မှာ ပဏာမ အခြေတည်ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်၊၂၀၀၇ ရွေဝါရောင်အပြီး ဆရာတော်ကြီးနဲ့ အမြဲမပြတ် တွေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဥသျှောင်အဖွဲ့ကိစ္စနဲ့ စာကြမ်းရေးကာ ဆရာတော်ကိုပြတဲ့ချိန် မစိုးရိမ်ဆရာတော်လို့ ငါကိုမရေးနဲ့ မစိုးရိမ်မဟာနာယကဆိုတာဘဲရေးပါ၊မစိုးရိမ်မှာ ဆရာတော်မရှိဘူး မဟာနာယကအဖွဲ့ပဲ ရှိတယ် လို့ပြောခဲ့ပါတယ်”
(အဘရဲ့ comment အတွက် ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးခဲ့တဲ့ link လေးကို ပြန်ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်တယ်။ ဦးဝီရသူက ခေသူတော့မဟုတ်ဘူး တော်တော်ကို ပညာတပ်တယ်လို့ကြားဘူးနားဝါရှိပါတယ်။ )
သံဃာတွေမှာ.. ဆန္ဒပြခွင့်.. သပိတ်မှောက်ခွင့်.. Rights အပြည့်ရှိပါတယ်..။
ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်.. ဆန္ဒပြတဲ့သဘော လုပ်ခဲ့တာပဲကိုး..
.. တိတိကျကျပြောရရင်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူတူရပ်.. အလုပ်လုပ်ကြရမယ်ထင်ပါတယ်လို့..
သူကြီးရေ ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်ဆန္ဒပြခဲ့စဉ်က အုပ်ချုပ်သူမင်းတွေက မင်းကျင့်တရား ညီခဲ့ကြပြီး သံဃာတွေအပေါ်မှာ မရက်စက်တတ်ကြဘူးဗျ၊ အခုဟာက အဲလို အုပ်ချုပ်သူမင်းမျိုးမဟုတ်လို့
ခံရတဲ့အခါ ရဟန်းသံဃာ ကိုယ်တော်တွေဘဲ အထိနာတာဖွယ်ရှိလို့ မသင့်လျှော်ဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံး ရွေးချယ်တားနေရတာပါဗျာ။ ပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့ လိုချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်း အဟောဒီကန် ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါခင်ဗျ။ အစိုးရမှာ လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ် အဲဒါက ဆန္ဒပြမှု့ကနေ သပိတ်စခန်းပုံစံထိဆွဲခေါ်ပြီး အခြေအနေကို တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးသွားတာပါဘဲ။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးက အဲ လိုနဲ့အဆုံးသတ်သွားရပါတယ်။ အဲလိုမျိုးအခြေအနေဘက်ရောက်သွားရင် ကော်မရှင်လည်း အခက်တွေ့သွားမှာလေ။ အဲလို အဲလို ဗျ။
ဒီသဂျီးဂို ကျုပ် သိပ်မသင်္ကာတော့ဘူး
အမှန်မှာဆို ဒီပြဿနာက မေမေကြီးကို အပီကစ်နေတဲ့သဘောစိတယ်
အဲ့သည်ပြဿနာကို လက္ခံပေးရမယ် လက်မခံ နိုင်ဘူး ဒီလိုသဘောရှိအောင်ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဘုန်းတော်ကြီေးတွ လမ်းပေါ်တက်တာကတော့ ကျုပ်လည်းသဘောမတွေ့ဘူး
ဘယ်ကောင်တွေက နောက်ကနေ ဘုန်းတော်ကြီေးတွကို ကြပ်ပေးနေတယ်လို့ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးတွေအုပ်စုဖွဲ့ဖြစ်လာအောင် အားပေးမြှောက်ထိုးလုပ်တဲ့သတ္တဝါတွေကို
သတိထားသင့်တယ် ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ အကောင်ပေါ်အောင်ကြည့်သင့်တယ်
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ရေ အမှန်ဘဲဗျာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးတွေအုပ်စုဖွဲ့ဖြစ်လာအောင် အားပေးမြှောက်ထိုးလုပ်တဲ့သတ္တဝါတွေကို သတိထားသင့်တယ် ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ အကောင်ပေါ်အောင် ကြည့်သင့်တယ် ဆိုတာလေးကိုပါ။
အဲဒါပါပဲ ကျွန်တော်လည်း အဲဒါကို ပြောချင်တာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေမှာ မို့လို့ ..
ပုသိမ်မှာလည်း ဆန္ဒပြ တယ်တဲ့ .. တစ်တိုင်းပြည်လုံးက အဲဒီလိုဖြစ်နေရင် (တိုင်းပြည် မငြိမ် မသက် ဖြစ်နေရင်) သုည ပြန်ရောက်သွားမှာကို အလွန်စိုးရိမ်မိပါတယ် .. ဆရာတော်တွေ အဲလို မိန့်လိုက်တာ မှန်ပါတယ် .. ..
သိပ်မှန်တဲ့ ဆုံးမသြဝါဒတွေကို ချီးမြှင့်ပေးတဲ့ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဦးဝီရသူ တို့ ကို လေးစားကျေးဇူးတင်မိပါတယ်
လေးခရေ ပြန်ရှဲပေးလို့ ကျေးကျေးပါ
ဘုန်းကြီး၊ အလုပ်သမား၊ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူ လမ်းပေါ်မထွက်စေချင်ရင် ဒေါ်စုနောက် တသားတည်း လိုက်စေချင်ရင် ဆုပ်ဆုပ်ပိုင်ပိုင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရလဒ်တခုခု လုပ်ပြပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ ဘွားဒေါ်က လေများနေတာသာ တွေ့ရတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ၆လပဲရှိသေးတယ်၊ တနှစ်ပဲရှိသေးတယ်၊ အခုလည်း ပြောပြန်ပြီ လ၂၀ပဲရှိသေးတယ် စောင့်ပါအုံးတဲ့။။ တကယ်ပြောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လပိုင်းအတွင်း ပြောင်းတယ်၊ မပြောင်းနိုင်လည်း အပြောင်းအလဲ အနံ့အသက်ကို နေ့ခြင်းညခြင်း ခံစားရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရှိပြီလား။ ရှိရင် တကယ်စစ်မှန်တဲ့ အနှစ်သာရပါတဲ့ ပြောင်းလဲမှုမျိုး ပြစမ်းပါ။ ခင်ဗျားတို့က ရှိထားတဲ့ အထုပ်လေး ပြေသွားမှာကြောက်တိုင်း အာဏာရှိသူကို ပလူးပလဲလုပ်ချင်တယ်။ အငြိုအငြင် ခံရမှာကြောက်တယ်။ သမိုင်းနဲ့ချီ ခံလာခဲ့ရလို့ သေချာအောင် ရှေ့တိုးစမ်းသပ်နေသူတွေကို အပုပ်ချတယ်။ ပြောလိုက်မယ် လဗျွတ်ပဲ အခါဆယ်ကုဋေ ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်ကွာ…။
ဒါကတော့ ကိုကြောင် ရယ်။
ကလေး တွေ နဲ့ ရဟန်း တွေ ကို ရှေ့ထုတ် ပြီး စမ်းနေတာက လဲ မှန်ကန် တဲ့ နည်းလမ်းမှ မဟုတ်တာ။
ကျွန်မ တို့ လေ နဲ့ စစ်တိုက် နေတာကလဲ မမှန်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ မှန်တဲ့ လေအား နဲ့ဖြစ်မယ် ဆိုရင်တော့ လဲ အဆိုးဖက် ကိုတော့ မရောက်ဘူးပေါ့။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလို အဆိုးမဖြစ်အောင် တားဆီးပေးတဲ့ ဆရာတော်ကြီး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးမှာ ရဟန်းတော်တွေ အမိုက်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့လို့ စစ်တပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးကာကွယ်ရေးလိုင်း ပြိုကွဲခဲ့တယ်။ သူ့ချည်းသက်သက်လို့ မပြောဘူး၊ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ တွန်းရိုက်လို့ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်သွားတာ သို့သော် အနိုင်ဂိုးလို့ပြောရင် ဘယ်သူငြင်းမလဲ။ အဲဒီဂိုး အနာခံ မသွင်းခဲ့ရင် လက်ရှိချံပီယန် စစ်တပ် သရေ ဒိုင်ပွဲရပ်နဲ့ ဖလားဆက်ထိန်းသွားမယ်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလည်း ဝုန်ကနဲ ဖြစ်လာတယ် မထင်နဲ့၊ ပွဲသေးပေါင်းများစွာ ဆက်ပြီးမှ ပွဲကြီးဖြစ်လာတာ။ ဘုန်းကြီးတွေ မှားတယ်၊ အသုံးချခံရတယ် အမြင်နဲ့ ပြောကြေးဆို ရွှေဝါရောင်မှာ အဖမ်းခံ အနှိပ်စက်ခံ သေကြေခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက အလကား ညဏ်မရှိသူတွေလား။ အဲဒီတုန်းကလည်း အခုလူတွေလိုပဲ ဘုန်းကြီးတွေ မသင့်တာလုပ်လို့ ခံရတယ်နဲ့ ရေနစ်သူဝါးထိုးကူ ဝေဖန်တာ ရှိခဲ့တယ်။ ပွဲအပြီး သုံးနှစ်လောက်အထိ ရလဒ်ထွက်မလာတော့ ဘုန်းကြီးတွေကပဲ ခြေဆော့လက်ဆော့ လုပ်သလိုဖြစ်တယ်။ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး အပြောင်းအလဲဖြစ်တော့မှ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဦးဆောင်သူ ရဟန်းရှင်လူတွေကို ကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှန်းသိတယ်။ ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကို မှားတယ် အသုံးမကျဝေဖန်သူတွေ ရွှေဝါရောင်ပွဲတုန်းကလည်း ဒီလေသံပဲ ထွက်လိမ့်မယ်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို အမှားတခုလို့ မမြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သံဃာများ အနှိပ်စက်ခံ အသေခံခဲ့ကြတဲ့ အတွက်တော့ ထပ်မပါစေချင်ခဲ့တော့ဘူး ။ စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းလို့ ။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကြည့်ရက်တော့လို့ပါ။
ဒီလက်ပံတောင်းကတော့ လူတွေလုပ်ရင် ဖြစ်မှာပါ။ သိပ်လွန်လာရင် ပြည်ပမီဒီယာတွေထိ လုပ်လို့ ရတဲ့ အခွင့်အရေးရှိနေတာပဲ ။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော သံဃာများ ဓားစားခံဖြစ်ရတယ်လို့ တွေးမိနေတုန်းပဲ ။
တိုင်းပြည်တစ်ခု ဟန်ချက်ညီညီ ရပ်တည်ရာမှာ နိုင်ငံရေးချည်း မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး အားလုံး ဟာ နေရာမှန်မှန် ရှိနေမှ ကောင်းမှာပါ။
ရဟန်း တွေ လုပ်မှ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲရမယ် ဆိုရင်တော့ ဘာသာရေး မှာ ထိခိုက်စရာတွေရှိလာပါမယ်။
မြန်မာပြည်ဟာ ကံ ကံ ၏ အကျိုး ကို ယုံကြည်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစု နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံပါ။
ရဟန်း သံဃာ ဆိုတာကတော့ ဗုဒ္ဓ တရားတော်ကို လိုက်နာ ရုံ မက ပြန့်နှံ့အောင် လုပ်ရဖို့ တာဝန်ယူရသူတွေပါ။
ဒီတော့ ကံ ကံ ၏ အကျိုး အကြောင်း တရားတွေ ကို လက်ကိုင်ထားပြီး အဲဒီကနေ ဖြစ်ပျက်လာမှု တွေ ကို အရှည်မယူ ဖြတ်နိုင် သ၍ဖြတ်ပြီး လောဘ မောဟ ဒေါသ နဲနိုင်သ၍ နဲအောင်ထားပြီး မေတ္တာတရား ရှေ့တန်းထား နေကြသူ တွေဖြစ်နေကြရမှာပါ။
လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမဲ့အစား ကိုယ်ကျိုးရှာအစိုးရ ကို ဖြစ်နိုင်သ၍ တရားသောအစိုးရဖြစ်အောင် အေးချမ်းစွာ တရားဟောဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးရဟန်းလို့ အမည်ခံပြီး ကို့ရို့ကားရား ပြောဆို လုပ်ကိုင် နေတဲ့ ရဟန်း တွေ ရှိနေတာကိုလဲ ကကြောင်ကြီး သိနိုင်မှာပါ။
ကိုယ့်စည်းစိမ် ရာထူး မြဲဖို့ စစ်ယူနီဖောင်း ကို ဒိုင်းလို ကာ နေတဲ့ အစိုးရ ကို တိုက်ဖို့ သင်္ကန်းကို ဒိုင်းလိုအကာအကွယ် ယူ လက်နက် လို သုံး နေခဲ့တာလဲ နည်းလမ်း မမှန်ပါ။
ဒီလို တွေ ကြောင့် နဲ့ဘဲ ကျွန်မတို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဖြစ်နေခဲ့တာလို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မ လဲ ဆရာကြီး မဟုတ်လို့ အဲလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မပြောတတ်ပါ။
နဲနဲ အဝေး ကနေ မို့ ခြုံမြင်မိတာလို့ တော့ ယူဆမိပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အင်မတန် စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အေသီးရစ် နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် မေးလာတဲ့မေးခွန်း
“ဒီလို ကိစ္စ ဖြစ်တာ ကံကံ၏အကျိုး လို့ ယူဆလား” ကို
ကျွန်မ ဘယ်လိုဖြေရမှန်း လုံးဝ မသိပါ။
သံဃာတော်တွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အသုံးချသွားတဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာသူတစ်စုရဲ့လုပ်ရပ်ဆိုတာ ဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာလူတစ်ယောက်မှမပါခြင်းကထင်ရှားနေပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကိုနောက်ပြန်လှည့်တဲ့
အဖြစ်မျိုးရောက်အောင်(သို့)သမ္မတကြီးကိုယုံကြည်မှုတွေပျက်အောင်(သို့)စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်အောင် လုပ်ချင်သူတစ်စုနဲ့နိုင်ငံတော်အကြားမှာမြေဇာပင်မဖြစ်ရအောင်စဉ်းစားချင့်ချိန်ကြစေလိုကြောင်း သံဃာတော်များကိုပန်ကြားလိုပါတယ်။
အရီး နဲ့ မမယ်ပု ရယ်၊ ဦးကြောင်ကြီး တို့ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးကွန်မန့်များအတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျ။
မမယ်ပု ကွန်မှာရေးထားတဲ့အချက်ကလေးတွေက ဒီပိုစ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၏ အနှစ်ချုပ်သဖွယ် ကိုက်ညီလို့ BC ပေးလိုက်တာပါဗျ။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု့ကြောင့် စစ်အစိုးရကို အနိုင်ဂိုးရစေခဲ့တာ မငြင်းပါဘူး၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မကျေနပ်ရင် မကျေနပ်ကြောင်း ပြဖို့တနည်းဘဲရှိတယ် လမ်းပေါ်တက် ဆန္ဒပြမှဖြစ်မယ်၊ အဲ လိုလမ်းပေါ်တက်ရင် စစ်တပ်က နှိပ်ကွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလည်း မသိကြတာမဟုတ်ဘူး အတွေးအခေါ်ဥာဏ်မရှိကြတာမဟုတ်ဘူး ဆန္ဒပြတဲသူတွေ အားလုံးသိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခြားသိစေတဲ့ အစိုးရကို တိုက်ရိုက်ထိသွားသိသွားစေတဲ့နည်းလမ်း အလွန်နည်းခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ အစိုးရလုပ်ရပ် မမှန်ကြောင်းပြော အဲဒီည လွတ်အောင်မပြေနိုင်ရင် ကျားတွေ ခြင်္သေ့တွေ လာစွဲပြီမှတ်။( အဲဒီခေတ်က စစ်ဝတ်နဲ့ဆို ကျား၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ဆို ခြသေ့င်္ပေါ့။ ခြင်္သေ့သိတယ်မလား သူတို့ပါတီတံဆိပ်ကြည့်ပေါ့)။အဲဒီတုန်းက ပြောခွင့်ရတဲ့ ဂျာနယ်ဘယ်မလဲ၊ မီဒီယာမှာကော အခုလောက်လေးတောင် ရေးခွင့်ရှိလား၊ တစ်ခါတလေ ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနကတဆင့်
ပြောချင်တာပြောရတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါးစပ်လည်း ပိတ်ထားလိုက်တဲ့ အကျယ်ချုပ်နဲ့ သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ သက်တန်းအကုန်ဘဲ၊ အဲဒီတော့ ပြောချင်တာတွေ မကျေနပ်တာတွေကို ပြောချင်ရင် ရဲစွန့်ကာလမ်းပေါ်တက်ကြပေတော့ဘဲ။
အခု အဲလိုအခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူးလေ ရေးကြပါပြီဂျာနယ်တွေ ပြောရပါပြီးလွှတ်တော်ဆီ ဆွေးနွေးချင်ရင် အခွင့်ရှိပါပြီ ဒါမျိုးတွေ အခုအစိုးရကလုပ်လာပြီး အဲဒီမှာ အနာခံပြီးလမ်းပေါ်ထွက်ချင်ကြသေးရင် မထွက်နဲ့မပြောပါဘူး ထွက်လိုတဲ့ လူတွေထွက်လေ ဘုန်းဘုန်းတွေတော့ မနာစေချင်တော့လို့ပါ။
တကယ်လည်း အဲလိုမလုပ်ဘဲ တိုက်ခိုက်လို့ရတဲ့နည်းတွေရှိနေလို့ပါ။ သူတို့ဘက်ကလည်း ဗျူဟာတွေ ပြောင်းနေလို့ပါ။ ရွှေဝါရောင်တုန်းက အစိုးရနှိပ်ကွတ်တယ် ပြန်တောင်းပန်ဖို့မပြောနဲ့ ဂရုတောင်မစိုက်ဖူး၊ အခု ပြန်တောင်းပန်တဲ့ ဗျူဟာတွေလုပ်လာတယ် ဒါဟာဘာကိုပြလဲဆိုရင် စားပွဲခုံတိုက်ပွဲဆင်နွလာတာပါဘဲ ဆိုလိုတာက လက်ရုန်းရည်ထက်နှလုံးရည်တိုက်ကွက်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဘုန်းဘုန်းများဆန္ဒတွေစောပြီး လမ်းပေါ်မထွက်ကြပါနဲ့အုံးလို့ တားနေခြင်းပါခင်ဗျ။
လဗျွတ်နိုင်ငံဒေါ်ဂျီးလားကွ… လဖွတ်ပဲထင်တယ်ဟေ့….. ပြောလိုက်နင့်တို့ သမဓဂျီးဂို မကြေနပ်ရင် ဆွီဒင်လောင်ချာနဲ့လာပစ်လို့… ငါကုလားတန်းက ဒံပေါက်ဆိုင်မှာ ရှိနေမယ်.. သောက်ချီး :saut:
၀င်ရောက်ဆွေးနွေး ကွန်မန့်ပေးကြသောသူအပေါင်း ဖတ်ရှု့အားပေးသူအပေါင်း ခင်ခမှ ကျေးဇူးပါ။
ကွန်မန့်ရေးကြရာဝင် အမြင်တူညီကြတာရှိသလို မတူညီကြတာလည်းရှိပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကွန်မန့်မှာ ကြိုက်သလောက်သဘောထားကွဲလွဲခွင့် ငြင်းခုံခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခင်ခ သဘောကိုအတိအလင်းပြောရရင် ဆဲရေးတိုင်းထွာတော့ ခင်ခပိုစ့်မှာ မရေးစေချင်ပါ။
မိမိရေးတဲ့ ဘယ်စာဘဲဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ရှိပါတယ် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကိုလေးစားစေချင်ပါတယ်။
အဲလိုမှ ပြောမရရင် ထိုထိုဆဲရေးသောသူခင်ဗျ ခင်ခမှ ရှစ်ကြီးရယ်ခိုးလိုက်ပါရဲ့ဗျာ။
ခင်ခ တရံရောအခါကရေးခဲ့တဲ့ပိုစ့်လေးပါ။ အလေးထားပြီး ရေးစေလိုပါတယ် ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါ။ ပြန်လည်ဖတ်လို့ရအောင်လင့်ပေးပါ့မယ်။
ဟားဟား…. ဗျားက ရှစ်ကြီးရယ်ခိုးတော့ ကျုပ်က ကိုးဂျီးငိုခိုးမယ်ဗျို့….။
လက်ပန်းတောင်းတောင် အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့(ကိုယ်စား) သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းမှ သံဃာတော်များအား ၀န်ချတောင်းပန် လျောက်ထားပွဲ အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီက မန္တလေးတောင်ခြေရှိ မဟာအတုလဝေယံ (အတုမရှိ) ကျောင်းတော်ကြီးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၀န်ချတောင်းပန် လျောက်ထားခြင်း အခမ်းအနားကို သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သမ္မတအကြံပေး ဦးလှမောင်ရွှေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦး သာအေး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်နှင့် ရဲမှူးချုပ် ဦးကျော်ကျော်ထွန်းတို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။အခမ်းအနားသို့ မန္တလေး၊မုံရွာ၊ပခုက္ကူစသည့် ဒေသများမှ သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများနှင့် လက်ပန်းတောင်းတောင်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော ရဟန်း၊သာမဏေများ အပါး ၁၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဆရာတော်ဦးဝီရသူမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖွဲ့အား ”သမ္မတရုံးဝန်ကြီးသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ကိုယ်စား တောင်းပန်တာဖြစ်တယ်။ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး တောင်းပန်တဲ့စကားသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်”ဟု အစချီ မိန့်ကြားပြီး ၀န်ကြီးအဖွဲ့အား ရှေ့မှတိုင်ပေးကာ ”အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့သည် မိုက်မဲသည့်အလျောက်၊ မလိမ္မာသည့်အလျောက် တွေဝေသည့်အလျောက် သံဃာတော်ကို အစိုးမရခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မိပါ၏။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့အား သံဃာတော်များက နောင်အခါစောင့်ဆည်းခြင်းငှာ အပြစ်ကို အပြစ်အဖြစ် ရှုမြင်လျက် ကရူဏာရှေ့ထား၊ မေတ္တာအားဖြင့် ခွင့်လွှတ်တော်မှုပါဘုရား” တိုင်ပေးကာ လိုက်လံ ဆိုခိုင်းခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းမှ တောင်းပန်စကား လျောက်ထားချက်မှာ ”ရိုသေလေးမြတ်စွာ လျောက်ထားအပ်ပါသည် ဆရာတော် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား။ မေတ္တာတရားဖြင့် ကြွရောက် ချီးမြှင့်တော်မှုကြကုန်သော ဆရာတော် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား အခုလို ဖူးတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် မင်္ဂလာတရားတော်နှင့် ညီညွတ်ပြည့်စုံပါကြောင်း၊ တပည့်တော်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေသက်ခင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ် ဦးကျော်ကျော်ထွန်း တို့လည်း အတူတကွ လျောက်ထားအပ်ပါတယ်ဘုရား။ ဆရာတော် ကြီးများ တွေ့ဆုံလျောက်ထားရသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကိစ္စတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော သံဃာတော်များအတွက် များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံ လျောက်ထားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။ ဘုရားတပည့်တော်အနေဖြင့် မန္တလေးမြို့မှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေသော သံဃာတော်များအား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ ကြည့်ရှုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
သံဃာတော်များ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကောင်းဆုံးကုသမှုဖြင့် စောင့်ရှောက်မှုပေးရန် ယခုကဲ့သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်း ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ လိုအပ်သည့် ၀တ္ထုပစ္စည်း ဆေးဝါးများလည်း နိုင်ငံတော်က အပြည့်အ၀ တာဝန်ယူကာ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ် ပါကြောင်း ဆရာတော်ကြီးများအား လျောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။ ဘုရားတပည့်တော်အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရတနာသုံးပါးကို ဦးထိပ်ထားပြီး သရဏဂုဏ်သုံးပါးကို တည်ဆောက်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ သံဃာတော်များ ယခုကဲ့သို့ မမျော်လင့်ဘဲ ထိခိုက်အနာတရ ဖြစ်ရခြင်းအတွက်ကြောင့် များစွာစိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါကြောင်း ကြွရောက်လာသော ဆရာတော် သံဃာတော်များကို ဦး ထိပ်ထားတိုင်တည်၍ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား တပည့်တော်မှ တောင်းပန် လျောက်ထားအပ်ပါတယ်ဘုရား။ သံဃာတော်များအနေနှင့် မိမိတို့၏ ဆွမ်းဒကာ ဒကာမများ၏ ဆန္ဒကို စာနာလိုက်လျောပြီး ယခုကဲ့သို့ သပိတ်စခန်းများတွင် ရောက်ရှိပါဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်ဘုရား။ သို့ဖြစ်၍ မမျော်လင့်ဘဲ ထိခိုက် နာကျင်မှုများ ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်ဘုရား။ ဖြစ်သင့်သည်မှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျေအလည် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း အဖြေရှာပြီးဆောင် ရွက်လျင် ပို၍အကျိုးရှိမည်ဟု ထင်မြင် ယူဆမိပါသည်ဘုရား။ သံဃာတော်များအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ်ကို မကျေလည်သဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေသည်ကို တပည့်တော်တို့ သိရှိရပါသည်ဘုရား။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကို အများဆန္ဒအတိုင်း အခြေအနေအမှန် ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်း ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိပါတယ်ဘုရား။ ကော်မရှင်၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေသည့်ကိစ္စများ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တပည့်တော်တို့အပါအ၀င် ပြည်သူများ သံဃာတော်များက ကူညီရန် လိုအပ်ပါတယ်ဘုရား။ သံဃာတော်များ၏ ဆန္ဒကို သိရှိပြီး ဖြစ်သဖြင့် သံဃာများ ဆန္ဒပြနေခြင်းကြောင့် ဆွမ်းဒကာ၊ ဒကာမများရော အုပ်ချုပ်သူများ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ အများပြည်သူများအတွက် အခက်အခဲများဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ပူပန်မိပါသဖြင့် ဆရာတော် သံဃာတော်ကြီးများက တရားတော်နှင့်အညီ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် လျောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် တင်ပြလျောက်ထားလိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်အတွင်း အများပြည်သူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှလုံး အေးချမ်းစေပြီး သာသနာတော်ကြီး အဓွန့်ရှည် တည်တန့်ခိုင်မြဲရေးအတွက် ဆရာဒကာ တရားတော်နှင့်အညီ မေတ္တာတရားဖြင့် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြင့် သာသနာ့အကျိုး တိုင်းပြည်အကျိုး သည်ပိုးဆောင် ရွက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း တပည့်တော်မှ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ကိုယ်စား ရိုသေလေးမြတ်စွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည် ဘုရား”ဟု လျောက်ထား တောင်းပန်ခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းမှ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များအား တောင်းပန်စကားများ လျောက်ထားပြီးသည့်နောက် ဆရာတော်ကြီးများ၏ သြ၀ါဒများကိုခံယူကာ ဂဌုန်နီဆရာတော်မှ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များ ကိုယ်စား ခွင့်လွှတ်တော်မူကြောင်းနှင့် သံဃာတော်များဖက်သို့ ခွင့်လွှတ်ကြပါက သာဓုသုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုပေးကြပါရန် ပြန်လည်လျောက်ထားခဲ့ရာ သံဃာတော်များမှလည်း ခွင့်လွှတ်ကြောင်းဖြင့် သာဓုသုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုပေးခဲ့ကြ ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခု တောင်းပန်လျောက်ထားခြင်းကို သံဃာတော်များမှ လက်ခံခဲ့ပြီးနောက် ဒဏ်ရာပြင်းထန်သော သံဃာ ၄ ပါးအား ပြည်ပတွင် သွားရောက် ဆေးကုသမှု ခံယူနိုင်ရန် ၀န်ကြီးများကို တောင်းဆိုခဲ့ပြီး သမ္မရုံးဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းက”ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့ သံဃာလေးပါးကို ရန်ကုန်မှာ အရင်ဆုံးခေါ်ယူကုသပြီး နောက်ပိုင်း လိုအပ်သလို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပေးသွားပါမယ်”ဟု သံဃာတော်များအား ပြန်လည် လျောက်ထားခဲ့သည်။
အခုလို သတင်းလေးကို ၀င်ပြီးရေးပေးတဲ့အတွက် nozomi ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ဘုန်းကြီးတွေကို အသုံးချလို့ကောင်းမှန်းသိသူတွေ အသုံးချကြပါလိမ့်မယ်….။
အရင် ၁၉၄၈-၁၉၆၀ ပထစအစိုးရ တုန်းကလဲ ဒီလို အသုံးချခဲ့ကြတာ ပါတီအသီးသီးက ဘုန်းကြီးအသီးသီး မွေးခဲ့ကြတာ၊ ကျောင်းတိုက်ကြီးတခုထဲမှာပဲ ဘယ်ကျောင်းက ဖဆပလကျောင်း ဘယ်ကျောင်းက ပမညတ ကျောင်း စသည်ဖြင့်ကွဲခဲ့ကြတာ ရှိပါတယ်။
ကျုပ်တို့က အဲဒါကို ကြိုက်တယ်လေ….
အဲတော့ သူ့အရပ်နဲ့သူ့ဇတ် ….
ဟိုးအရင်က ပါတီအစွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ စာပေထဲမှဖတ်ဖူးပါတယ် ဦးပါခင်ဗျ။
အဲဒီတုန်းကတော့ ပါတီတွေရဲ့ အင်အားကြီးမားပုံ စွမ်းဆောင်နိုင်ပုံ ကိုမမှီလို့မပြောတတ်ပေမယ့် အခုက အဲဒီလောက် အစွဲကြီးရအောင် အင်အားကြီး စွမ်းဆောင်ပါတီက သိပ်မရှိဘူးလေ၊ အာဏာရပါတီနဲ့ အန်အလ်ဒီ ဒီနှစ်ခုဘဲ လောလောဆယ်ရှိနေတယ်ထင်တာဘဲဗျ။
နောင်တော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့။ ၂၀၁၅ မှာတာ ထပ်ရွေးခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့။
အဲဒီ ဘုန်းဘုန်းတွေ အသုံးချပုံနဲ့ အခု အသုံးချမယ့်ပုံက မတူဘူးလေဗျ။
ဗျားတို့ကလည်းဗျာ သဂျီးသမီးယူရင် သဂျီးအိုဂျီးကို အိမ်ဦးခန်းတော့ တင်ကျွေးထားရမှာပေါ့။ မကျွေးချင် မယူနဲ့၊ ယူပြီးမှတော့ ဆီးယူလိပ်တား လုပ်လို့မရဘူးလေ။ ဟိုက သမီးပေးထားတာ။ အဲလိုပဲ ဘိုင်ကျတုန်း ဘုန်းကြီးကျောင်းကပ်နေ ဘုန်းကြီးဆွမ်းခံကျွေးတာ တဖြဲနဖြဲဝါးပြီး အဆင်ပြေသွားတော့မှ ဘုန်းကြီး မြို့မနေသင့်ဘူး တောကျောင်းမှာနေ ပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလား။ ဆန္ဒပြကိုယ်တော်တွေ ပဋိပတ်အကျင့်နယ်က ကိုယ်တော်တွေ မဟုတ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် လောကီ၊ လောကုတ် သီးသန့်သွားတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ သို့သော် လက်တွေ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အဲသလိုဖြစ်မလာအောင် အခြေအနေတွေက တွန်းပို့ထားတယ်။ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ယူနီဖောင်းဝတ် စစ်တပ်ကို သူတို့လို အင်အားရှိတဲ့ သင်္ကန်းဝတ် ကိုယ်တော်တွေကပဲ အနီးစပ်ဆုံး တန်ပြန်နိုင်တယ်။ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ပါ၊ ယခင်က ရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ဥပမာ – ကျောင်းသား သမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ စတာတွေ ကာလတိုတခုအတွင်း ဖျက်ဆီးခံရတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေပဲ ကျန်ခဲ့တယ်၊ စစ်တပ်က ဘုရားတရား ကြည်ညိုလို့များ ထင်သလား၊ ဘယ်လိုမှ ဖျက်မရလို့ ကြည့်နေခဲ့ရတာ။ အခုရော စစ်တပ်ပြန်မလာဘူး ဘယ်သူ အာမခံနိုင်သလဲ။ ပြန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပါတီ သမဂ္ဂတွေ အခြေခိုင်ပြီလား။ ဝေးပါသေး…..
မလိုချင်ရင် အစထဲက အဝင်မခံနဲ့၊ ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ ထိုက်သင့်တဲ့ ဝေစုပေးရမှာပဲ။ ဟုတ်တယ်နော် သူတို့လည်း ပုထုဇဉ်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်ရှိမှာပဲ။ လုပ်နိုင်တာ ခေတ်နဲ့ညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ဦးတည်ချက် လိုက်နာမှု ဖြစ်အောင် ဘုန်းကြီးတွေကို လျောက်ရမယ်။ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာ မဖြစ်ပါနဲ့ ပြောလို့မှ မရတော့တာ။ တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ဖို့ စစ်တပ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နောက်ဆုတ်တာ လက်ခံသင့်တယ် ဆိုရင် ဘုန်းကြီးတွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲပေါ့။ ရှိတာ ရှိနေပါစေ.. မလွန်ကျူးရင် ပြီးတာပဲ။
အခုလို ဆန္ဒပြပွဲ ဘုန်းကြီးတွေဘက်က မလုပ်ခဲ့ရင် မီးလောင်သံဃာတွေကို တောင်းပန်ခြင်းအမှု အစိုးရက လုပ်ပါ့မလား။ တော်ရုံ သာမာန် တော်အိလျော်အိနဲ့ ပြီးသွားမှာပေါ့။ အစောပိုင်းမှာ အဖြစ်တောင်းပန်ခဲ့တာပဲလေ။ သိပ်လည်း စစ်လမ်းမနီးကြပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်း ထားကြပါအုံး။ စစ်တပ်၊ အစိုးရအာဏာကို အတိုက်အခံဖက်က အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့ ဒီအချိန်မှာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီ ညီမျှမှု အီကွေးရှင်းကို ဒေါ်စု၊ အန်အယ်လ်ဒီ၊ ၈၈အဖွဲ့ တွေနဲ့တင် မထိန်းနိုင်ဘူး၊ ဘုန်းကြီးတွေပါလာမှ ယောင်ယောင်လေး မျှရုံရှိသာ…………………. ဆဲဒယ်ကွာ leeဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ထားတဲ့အောင်ပု သိပ်ခန့်တယ်။
ပညာပါ အဆဲနှင့် အဆုံးသပ်ပြီးကွန်မန့်ပေးသူခင်ဗျ comment off လုပ်ပြီဗျာ။